Imepụta Imepụta Imepụta - Imepụta Imepụta Imepụta Ahịa - Nzube Imepụta Ime Obodo, Studio, Onye Nhazi, Onye Mmebe, Ụlọ Ọrụ, Nzube, Ahịa
Echiche nke ime imewe na drafting na-mgbe gụnyere ke nkwadebe nke atụmatụ na stylistic ngwọta, na a set nke nghọta 2d maka ime imewe ụlọ ọrụ, ha ga-abụ nkume isi nkuku nke ọrụ anyị na ntọala nke ihe ịga nke ọma mgbe e mesịrị decorations. Na nke a Mmepụta ime ụlọ anyị lebachara anya na nkọwa nke otu isiokwu maka ọrụ ọ bụla nke ọrụ ụlọ ọrụ anyị na-arụ na ime ụlọ anyị. Na njedebe nke ibe anyị nyere anyị ozi bara uru maka ndị ahịa ga-achọ maka imewe ụlọ ime ụlọ, ozi gbasara ohere kwesịrị ekwesị maka mgbanwe ndị a ga-eme mgbe e mepụtara imewe ime. Pọtụfụụ nke ime ụlọ imepụta ụlọ ndị mara mma na ụlọ elu, ụlọ ala nke oge a na ala dị iche iche dị iche iche na-adabere na ụdị ịhọrọ na mgbagwoju anya nke ọrụ ahụ.
Ahịa nke ụlọ imepụta ụlọ ọrụ ụlọ
Ịmepụta ụlọ ime ụlọ ime ụlọ
Imepụta imepụta ụlọ - Imepụta ime ụlọ ọrụ kpochapụwo ụdị ụlọ a
Ihe ọ bụla n'ime ime ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ mere Emeghị atụmatụ ime obodo ga-nwebiisinka site architects na ọkachamara na-emepụta kere dị nditịm kọwaa nwe (ụlọ, ụlọ oge a kpochapụwo ịke, itieutom na ndị ọzọ ụdị ezinụlọ obibi.) Dabere na kpọmkwem ọchịchọ nke ahịa, na njikọ na nke ọ butere oru ngo ime ụlọ dị na ọnụ ọgụgụ dị elu ma ọ bụ ọrụ ntinye aka na-enwe ike ịnapụta ihe ndị a gụnyere na ọrụ 3d imepụta ime na nsụgharị arụmọrụ saịtị. Lelee imepụta imewe imepụta ebe anyị zitere ozi ndị ọzọ iji hụ na ndị ahịa anyị n'ọdịnihu na ndị ụlọ anyị ghọtara na ọnụ ahịa ime ime ụlọ nke Nobili Interior Design na ụlọ na-aghọta ya yana akwụkwọ ọrụ nke òtù anyị mere ndị na-emepụta ihe, ndị na-emepụta ihe, ndị na-emepụta ihe nwere ike ịnweta ma dị mfe nghọta. Kedu ụdị ụdị ime ụlọ ị na-achọbu, ị nwekwara ike ịnye ọrụ ọrụ zuru oke nke gụnyere nkwado nke ụlọ ọrụ anyị na nhazi ọrụ ime ụlọ dịka ọrụ 3d. Nkwado na nhọrọ nke ime ụlọ na ịmecha ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ na-enye n'efu site na ụlọ ọrụ anyị. Ihe kacha pụta ìhè ị na-enye mgbe ị na-ahọrọ ọrụ ime ụlọ maka ụlọ ma ọ bụ ụlọ bụ ụgwọ nke ọrụ ahụ. Ahịa ozi imewe ime imewe ụlọ villa 17-25 euro square mita na maka ụlọ 25-40 euro square mita. Tariffs nke dị iche iche ụkpụrụ ụlọ sịrị na onye ọkachamara na ime imewe siri ike tụnyere n'ihi ịrịba iche nke ọrụ, na ihe dị iche nke akwụkwọ mere dị site na njedebe ime imewe oru ngo (ghara ikwu ihe pụrụ iche imewe echiche mere na nke ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ site na àgwà nke ihe dị iche iche anyị na-arụ ọrụ na mgbe ịmepụta echiche ime ụlọ). Anyị na-atụ na nkọwa zuru ezu nke ndị amaghị na anyị ụkpụrụ maka ịgbakọ preturlui ime imewe oru ngo maka ụlọ ma ọ bụ ụlọ dị na Constanta, Bucharest, Brasov na Ploiesti ghaghị ikwado mkpebi gị. The uru nke ọrụ maka emepe ime imewe oru ngo ụlọ ma ọ bụ ụlọ na anyị na-emezu ihe e kpere na mgbakwunye na nke ọkọlọtọ ọrụ zụrụ dịgasị dabere chọrọ na mgbagwoju nke oru ngo ga-ekwurịta okwu iche iche bara uru. Ị ga-ahụ na nke a, Atiya ime imewe oru ngo nke ụlọ classic okomoko n'uko akụkọ ụlọ Mediterranean style oge a Villas mere maka dị iche iche nke ụlọ gafee mba na ahịa n'etiti 17-30 euro kwa square mita na obodo ndị dị ka Bacau, Iasi, Suceava, Buzau, Craiova, Giurgiu, Focsani, Piatra Neamt, Braila, Tulcea na Galati.
Mkpụrụ imepụta imepụta ihe - Nhazi nke imepụta ime ụlọ